Na-enye igwe anaghị agba nchara, na ntanetị ntanetị, na-ekpuchi ọnụ ụzọ, na igwe anaghị agba nchara.
Nkọwa:Ọnụ Ụzọ Ákwà Ngwá Ọrụ Ngwácha,Ụlọ ntanetị na ntanetị,Ọnụ Ụzọ Ákwà Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Na-enweghị Ngwá Ọrụ,Ụlọ Egwuregwu Ngwá Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwá Ọrụ Eletriki,,
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Ntugharị Roller > Ọnụ Ụzọ Ákwà Ngwá Ọrụ Ngwácha
Ngwaahịa nke Ọnụ Ụzọ Ákwà Ngwá Ọrụ Ngwácha , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ọnụ Ụzọ Ákwà Ngwá Ọrụ Ngwácha , Ụlọ ntanetị na ntanetị suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ọnụ Ụzọ Ákwà Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Na-enweghị Ngwá Ọrụ R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ulo ahia di elu na emeghe uzo  Kpọtụrụ ugbu a
Ọrụ ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa eji akpọchi akpọchi  Kpọtụrụ ugbu a
Akpaaka igwe anaghị agba nchara ngwa ngwa  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa eji ebugharị nke logistic  Kpọtụrụ ugbu a
Highlọ ọrụ na-agba akwa ngwa ngwa roler shutter gate  Kpọtụrụ ugbu a
Igwe anaghị agba nchara ngwa ngwa igwe eji agba mmiri  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwa ngwa ngwa aluminihin onye eji eme ihe eji eme ihe  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa eji ebugharị ngwa ngwa  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa eji ebu ihe  Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ahịa na-eji ụgbọ okporo ígwè eme ihe  Kpọtụrụ ugbu a
Nnukwu ụlọ ahịa na-emepụta ụgbọ oloko  Kpọtụrụ ugbu a
Oghere Mkpuchi Rhino Mgbidi  Kpọtụrụ ugbu a
Ọkụ ígwè fireproof shutter turbine ọnụ ụzọ  Kpọtụrụ ugbu a
Nnukwu Rolgba Ọsọ na-eme Mgbagharị Ọsọ Aluminium uzo ike di elu nke ndi njem (ulo oru ihe eji eme njem) bu ihe di nkpa n’ime ulo oru ugbua. N'agbanyeghị ihe ị na-eme, kinddị ọrụ ị nyere, You na-achọkarị ọnụ ụzọ dị elu iji bulie arụmọrụ ma ọ bụ...
Nnukwu Ọkwa Dị Ọsọ na-emepe Ọchị Anya Aluminium uzo ike di elu nke ndi njem (ulo oru ihe eji eme njem) bu ihe di nkpa n’ime ulo oru ugbua. N'agbanyeghị ihe ị na-eme, kinddị ọrụ ị nyere, You na-achọkarị ọnụ ụzọ dị elu iji bulie arụmọrụ ma ọ bụ...
Nnukwu Ọkwa Dị Ọsọ na-emepe Ọchị Anya Dịka usoro iji meziwanye arụmọrụ nrụpụta, Industrylọ ọrụ mmepụta ihe na-emeghe ụzọAluminum siri ike ọsọ ọsọ dị elu (Mmechi ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ) na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ ọrụ kwa ụbọchị.Tainless steel Fast Rapid...
Nnukwu Rolgba Ọsọ na-eme Mgbagharị Ọsọ Aluminium uzo ike di elu nke ndi njem (ulo oru ihe eji eme njem) bu ezigbo ihe inye aka na ahia gi, I choro iwelie ike nke ije ije na mbufe gi, iga ebughari gi? Doorzọ ngwa ngwa a nwere ike igbo mkpa gị....
Nnukwu Rolgba Ọsọ na-eme Mgbagharị Ọsọ Aluminium uzo ike di elu nke na aru oru (ulo oru ihe eji emeghari ihe) bu udiri uzo eji eme ihe otutu oge, ndi ahia, ebe nkwuputa ihe, ngwa ahia di n’uwa. Oke ọsọ ọsọ dị ngwa ngwa na-arụ ọrụ ngwa ngwa mana...
Nnukwu Ọkwa Dị Ọsọ na-emepe Ọchị Anya Kedu ihe kpatara ịchọrọ Aluminium ọnụ ụzọ dị ngwa ngwa (mechiri emechi ụlọ ọrụ) maka azụmahịa gị? Aluminium uzo siri ike nke oma (ulo ahia onye na emeghari ihe) nwere ike imeghe / mechie ihe kariri 1m / s ma...
Nnukwu Ọkwa Dị Ọsọ na-emepe Ọchị Anya Aluminium uzo siri ike nke oma (ulo ahia onye na emeghari ulo ahia) na aru oru dika ihe di nkpa n’ise gi . Technology Category: Technical Paramerers Useage: Widely used in Hospital rooms,Resting room,Operation...
Ụlọ ahịa na-eji ụgbọ okporo ígwè eme ihe
Ụlọ ahịa na-eji ụgbọ okporo ígwè eme ihe Isi atụmatụ: Hongfa Automatic door ụlọ ọrụ na-enye dị iche iche nke ọnụ ụzọ. Oghere nke nchekwa Aluminom na-ekpuchi ọnụ ụzọ bụ otu n'ime ụdị ahịa kachasị mma. Ọ bụghị nanị na imeghe na mmechi ngwa ngwa,...
Ogwe ụzọ nkedo nkedo akpaaka akpaaka Isi atụmatụ: Hongfa Automatic door ụlọ ọrụ na-enye dị iche iche nke ọnụ ụzọ. Oghere nke nchekwa Aluminom na-ekpuchi ọnụ ụzọ bụ otu n'ime ụdị ahịa kachasị mma. Ọ bụghị nanị na imeghe na mmechi ngwa ngwa, ike...
Oghere Mkpuchi Rhino Mgbidi Kedu ihe bụ isi nke nchara ígwè na-emechi ụzọ? Hongfa Automatic door ụlọ ọrụ na-enye dị iche iche nke ọnụ ụzọ. Oghere nke nchekwa Aluminom na-ekpuchi ọnụ ụzọ bụ otu n'ime ụdị ahịa kachasị mma. Ọ bụghị nanị na imeghe...
Ọkụ ígwè fireproof shutter turbine ọnụ ụzọ
Ọnụahịa otu: USD 1000 - 1800 / Set/Sets
Ọnụ ụzọ na-ekpuchi ọkụ ọkụ nke ígwè Ọnụ ụzọ na-ekpuchi ọkụ ọkụ ígwè dị mma maka ụlọ obibi, ụlọ ọha na ụlọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. A na-ejikarị ha eme njem na ala ụlọ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa ndị na-ere ọkụ ebe achọrọ ọkụ, ebe ndị ọkụ na ọkụ ọkụ. A pụrụ...
China Ọnụ Ụzọ Ákwà Ngwá Ọrụ Ngwácha Ngwa
Iji akwukwo uzo di iche iche nke edoghi anya 201, nkenke nkenke nke ichikota usoro.
Ngwá ọrụ enyi na enyi, nke kachasị mma, nguzogide, nchebe ohi, ọkụ ọkụ, ventilashị, ịhe mma, ihe bara uru, nkwonkwo ọkụ na enweghị ike ịme ihe, mgbochi peeping.
Njikwa ọgụgụ isi, na-amụba usoro ịkwọ ụgbọala.
Ụdị dị iche iche na agba na nhọrọ.
Inye usoro ihe omuma di iche iche dika ndi oru di iche iche choro.
Nchedo dị iche iche na ihe ndị eji achọ mma, ọnụnọ kachasị mma nke nnweta nchebe netwọk ọdịnala; ụzọ dị iche iche na-agbanwe agbanwe, nkwado aka, njikwa otu. Ọnụ ụzọ ahụ nwere ike ịbụ ọwa nnapụta gị nke ọma mgbe ọ bụla na mberede.
Ọnụ Ụzọ Ákwà Ngwá Ọrụ Ngwácha Ụlọ ntanetị na ntanetị Ọnụ Ụzọ Ákwà Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Na-enweghị Ngwá Ọrụ Ụlọ Egwuregwu Ngwá Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwá Ọrụ Eletriki Ọnụ Ụzọ Ámá Ngwá Ngwácha